Madaxweyne Farmaajo oo ka hadlay heshiiskii Sucuudiga iyo magacaabista ra’iisul wasaaraha cusub (DAAWO) – Bulshoweyn Online | Your Source Of News And Entertainment
Madaxweyne Farmaajo oo ka hadlay heshiiskii Sucuudiga iyo magacaabista ra’iisul wasaaraha cusub (DAAWO)
Wafdi uu hogaaminayo madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed C/laahi Maxamed Farmaajo ayaa maanta dib ugu soo laabtay magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka Soomaaliya, kadib markii booqasho labo maalmood qaadatay ay dhawaan ku tageen dalka Boqortooyada Sucuudi Carabiya.
Madaxweyne Farmaajo ayaa dalka Sucuudiga kula kulmay boqorka dalkaasi, boqor Salmaan Bin Cabdicasiis Al Saud iyo labadiisa dhaxal suge, isagoo ka codsaday inay dowladda federaalka Soomaaliya ka taageeraan dhinacyada horumarinta, kaabayaasha dhaqaalaha, qaadista xayiraadda ganacsiga xoolaha iyo gurmadka abaaraha.
Sidoo kale, madaxweyne Farmaajo ayaa sheegay in qorshayaashii ay dowladda Soomaaliya hordhigtay boqortooyada Sucuudiga ay ka mid yhiin, miisaaniyadda dalka, dhismaha xarumo cusub oo ay hay’adaha qaranku ku shaqeeyaan, dhisida garoon diyaaradeed cusub, dib u dhiska waddooyinka isku xira magaalooyinka dalka iyo dib u howlgelinta safaaradii boqortooyada Sacuudiga ee magaalada Muqdisho.
Madaxweyne Farmaajo oo warbaahinta kula hadlay xafiiskiisa xarunta madaxtooyadda Villa Soomaaliya ee magaalada Muqdisho ayaa sheegay in dhammaan codsiyadii ay u bandhigeen dowladda Sacuudiga laga aqbalay, isagoona dhinaca kale si faah-faahsan uga hadlay shaqsiyadda ra’iisul wasaaraha cusub ee uu dhawaan soo magacaabay Mudane Xasan Cali Kheyre iyo waxyaabaha qaaska ah ee uu kusoo doortay.
“Sidaad la socotaan, ra’iisul wasaaraha aan magacaabay labo maalmood ka hor Xasan Cali Kheyre, waa shaqsi leh aqoon maamul iyo mid bini’aadanimo, ahna xilligaan la joogo mas’uul ku haboon xaaladda dalka, waxa ugu muhiimsan ee aan u doortay Xasan inuu yahay shaqsi aan aaminsanahay inuu igula shaqeyn karo mabaadi’deyda iyo ammaanada ummadda Soomaaliyeed, sidoo kalena aan ka wada qeyb-qaadan karno la dagaalanka musuq-maasuqa” Sidaas waxaa yiri Madaxweyne Farmaajo.
Dhinaca kale, madaxweyne Farmaajo ayaa ka codsadey xildhibaanada labada Aqal ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya inay sida ugu dhaqsiha badan kalsoonidooda ku siiyaan ra’iisul wasaaraha uu magcaabay Mudane Xasan Cali Kheyre.
Ugu dambeyntii, madaxweyne Farmaajo ayaa sheegay in dhawaan baarlamaanka federaaalka Soomaaliya la hor-geyn doonno miisaaniyad aad uga ballaaran kuwii horey loo arki jiray, maadaama ay dowladdu heysato ballan-qaadyo waaweyn oo wax badan kusoo kordhin karna miisaaniyadda dalka.